Talo soo jeedin ku aadan Qidmada Ilkaha ee Dadka Waaweyn oo lasoo bandhigay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaTalo soo jeedin ku aadan Qidmada Ilkaha ee Dadka Waaweyn oo lasoo bandhigay
Baaritaan gaar ah oo dowladeed ayaa soo jeedisay in la dajiyo lacag go’an oo loogu talagalay baaritaanka ilkaha, iyo qaar ka mid ah kiisaska daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah ee loogu talagalay dadka waaweyn ee 200 karoon.
Hindisahan ayaa qeyb ka ah baaritaan la doonayo in maanta loo soo bandhigo dowlada, kaas oo ay hogaamineysay Veronica Palm, oo ah baare gaar ah oo lagu gaarayo sinaanta qeybta ilkaha.
Daryeelka ilkaha ee Iswiidhan wuxuu ku kala duwan yahay adeegyada kale ee daryeelka, bukaanka laftiisa ayaa qaata qayb badan oo kharashka ka mid ah.
Baaritaanku wuxuu soo gabagabeeyay in sinaan la’aanta sii kordheysa ee daaweynta ay xoojineyso kala duwanaanshaha caafimaadka ilkaha ee dadka.
Sida ku xusan soo jeedinta, khidmadda bukaanka ee 200 karoon ayaa beddeleysa kaalmada daryeelka ilkaha.
Sidoo kale, sida ku xusan soo jeedinta, taageero cusub oo daryeelka ilkaha ah ayaa la siin doonaa dadka naafada ah iyo dadka waayeelka ah ee u baahan daryeelka.
“Dadka da’doodu u dhaxayso 20 ilaa 23 waa inay ku lug yeeshaan ka faa’iideysiga kaalmada daryeelka ilkaha oo aysan ku jirin daryeelka bilaashka ah ee carruurta iyo dhallinyarada,” ayay tiri Veronica Palm.